The New Ecommerce Metrics You Kwesịrị Trachụ | Martech Zone
Friday, April 10, 2015 Friday, April 10, 2015 Jim Sterne kwuru
Ngwongwo ahia (dika Wikipedia dika nke March 19 na 10:18 am Pacific Timelight) bu:
Omume ọ bụla nke na-enye aka maka ire ngwaahịa maka ndị na-ere ahịa. Na ọkwa ụlọ ahịa, ire ahịa na-ezo aka n'ọtụtụ ngwaahịa dị maka ọrịre na ngosipụta nke ngwaahịa ndị ahụ n'ụzọ ọ ga-akpali mmasị ma rata ndị ahịa ịzụrụ.
Akpa (apocryphal) akụkọ mbu ahia na data gbasara akwa bekee na biya. Mgbakọ na mwepụ ahụ gosiri na ndị zụtara diapers a na-eji ekpofu ya n'ụlọ ahịa dị mma, kama ịga njem a haziri nke ọma na nnukwu ụlọ ahịa ahụ, - n'echeghị echiche - tụtụkọtara biya biya isii.
Ọrụ nke onye na-ere ahịa bụ ikpebi ma ọ bụrụ na ịchekwa ihe abụọ ahụ ọnụ ga-eme ka ahịa biya biya, ma ọ bụ ịhapụ ha n'ụzọ anụ ahụ ga-eme ka ahịa nke ihe ndị ọzọ na-akpali agụụ mmekọahụ. Ezigbo data-drive merchandiser ga-anwale ma - na mpaghara dị iche iche - na mpaghara mmekọrịta mmekọrịta akụ na ụba - na ọnụahịa dị iche iche.
Merlọ ahịa na-ere ahịa na-eru elu nke data ya mgbe akụkọ si na Japan pụta maka etu ụlọ ahịa 7-Eleven si gbanwee ngwaahịa ha nwere na shelf ha dabere na oge nke ụbọchị iji bulie ohere ha na-ere pere mpe.
Fọdụ ndị na-emepụta ihe nwere ego ụfọdụ mgbe ha na nnukwu ụlọ ahịa na-arụ ọrụ. Na ngbanwe maka oke dị elu, ọnụahịa mbufe, ngwugwu pụrụ iche, wdg. Ụlọ ahịa na-ere ahịa nwere ike inye ndị mmekọ kachasị mma echiche pụrụ iche.
Ma gịnị na - eme mgbe ngosipụta ụlọ ahịa ahụ bụ ihe anaghị ahụ anya ma ọ bụ na - emepụta ihe na - agbanwe agbanwe dabere na onye na - azụ ahịa? Nabata na ngwa ahia n'ịntanetị.
Ebee, Oh Ebee Ka Ngwaahịa M Dị?
Ọ bụrụ na ị na-ere site na Amazon, BestBuy ma ọ bụ Costco, ị maghị ma ngwaahịa gị ọ bụla gosipụtara na ibe ụlọ, na otu ụdị enyere ma ọ bụ n'oge nyocha saịtị ọ gwụla ma a na-emekọrịta ihe ndị a na ọfụma.
Nke a bụ ebe ọhụụ ọhụrụ Nchọpụta na Pzụ ahịa Bata.
Ejiri site na Nchịkọta ọdịnaya:
Nchọpụta bụ ọ̀tụ̀tụ̀ nke ikike onye na-eri ihe nwere ike ịchọpụta ngwaahịa na ntanetị.
Pzụ ahịa na-emetụta ikike onye ahịa nwere ime mkpebi ezi uche dị na ya
Enwere ozi zuru oke gbasara nkọwa, nha, nkwakọ ngwaahịa, ọnụahịa, wdg, maka ha itinye ya n'ụgbọ ahịa?
Onye nyocha ọdịnaya David Feinleib na-ekwu na ihe karịrị 75% nke nyocha saịtị na isi saịtị e-commerce dị ka Amazon na Walmart.com bụ okwu ọchụchọ ọchụchọ karịa aha aha. Kedu otu esi amata ma ngwaahịa gị ọ pụtara na ibe mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ ụlọ ahịa? Nke a dị oke mkpa n'ihi na ngwaahịa ndị dị n'elu atọ nwere ọ enjoyụ ugboro anọ karịa karịa nsonaazụ ndị ọzọ niile. N'ezie, mbipụta a kawanye njọ site na ịzụ ahịa ekwentị.
N'akụkụ Shopability, onye na-ere ahịa n'ịntanetị kwesịrị ịma ma ọ bụrụ na e nyefee onye zụrụ ahịa ozi ahụ n'ụzọ ziri ezi, n'oge kwesịrị ekwesị, iji mee ka ha bụrụ onye na-azụ ihe. Foto, nkọwapụta na nyocha ga-anọrịrị iji nweta ọrịre ahụ.
Teknụzụ na Nnapụta
Oge obula, Nchịkọta Ọdịnaya nyochaa saịtị mkpọsa gụnyere Amazon, Best Buy, Costco, CVS, Drugstore.com, Ụlọ Sam, na Walmart ịhụ ebe na otu ngwaahịa gị si egosipụta.
Ihe bụ na ngwaahịa? Na-anya.
Otu ihe na-efunahụ ogo ya na nsonaazụ ọchụchọ? Na-anya.
Gị osompi gbanwee ọnụego ha n'onye na-ere ahịa nyere? Na-anya.
Ezughi oke nọmba nke nnyocha ngwaahịa? Na-anya.
Bad viewability na ngwaọrụ mkpanaka? Na-anya.
Pictures adịghị enye nsụgharị dika aturu anya? Na-anya.
Ọ bụ ezie na teknụzụ n'onwe ya nwere ike ọ gaghị adị ịrịba ama, nchịkọta na nyocha nke ụdị data dị mma na-egosi ion ụwa bara uru dị oke ọnụ.
Ọ bụrụ n’ị nọ n’ime ụwa ecommerce, ọ bụ oge igbakwunye Findability and Shopability na akwụkwọ ọkọwa okwu gị metrics.
Tags: ecommercemetric azụmahịaịchọtaịzụ ahịa
Jim Sterne kwuru
Jim Sterne kwuru bụ onye ndụmọdụ mba ụwa nke na-elekwasị anya n'ịlele uru ịmepụta na iwusi mmekọrịta ndị ahịa ike. Sterne dere akwụkwọ asatọ na mmekọrịta mmekọrịta, bụ Onye isi ntọala na Onye isi oche nke ugbu a Analytù Nyocha nke Dijitalụ ma na-arụpụta ihe Nzukọ eMetrics na Nzukọ Nchịkọta Mgbasa Ozi.
MockupsJar: Stock Mockups maka Mobile na Desktọpụ